इजरायलमा प्रधानमन्त्री बनेका नेफ्टाली बेनेट को हुन् ? - OK Khabar
इजरायलमा प्रधानमन्त्री बनेका नेफ्टाली बेनेट को हुन् ?
ओके खबर ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १३:१० मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ६४ पाठक संख्या
काठमाडौं । इजरायलमा १२ वर्षपछि बेन्जामिन नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाउँदै नेफ्टाली बेनेट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लोपटक भएको आम निर्वाचनमा बेनेटको यामिना पार्टी पाँचौं स्थानमा थियो । तर, नेतान्याहूको पार्टी पहिलो भएको थियो । यद्यपि बेनेट नेतान्याहूलाई हटाउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जुटाउन सफल भए ।
यससँगै नेतान्याहू इजरायलको प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा भएका छन् । इजरायलका आठ पार्टीहरुले नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाएका हुन् । यद्यपि आठ पार्टी मिल्दा पनि निकै झिनो अन्तरको बहुमत नयाँ सरकारलाई छ ।
त्यसैले अन्तिम समयसम्म पनि नेतान्याहूले हार भने मानेका थिएनन् । बुधबार संसद्मा भएको निर्वाचनमा नेतान्याहूको पक्षमा ५९ मत खस्दा बेनेटले उनको भन्दा एक मत बढी पाएका थिए ।
नेतान्याहूको लिकुड पार्टी छाडेपछि बेनेट दक्षिणपन्थी धार्मिक यहुदी होम पार्टीमा गएका थिए । सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा बेनेट निर्वाचित भएर इजरायलको संसद्मा पुगेका थिए
सरकारबाट हटे पनि नेतान्याहू इजरायलको प्रमुख पार्टी लिकुडको प्रमुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा भने कायम रहनेछन् ।
बीबीसीका अनुसार नेफ्टाली बेनेटको यामिना पार्टीको संसद्मा केवल सात सिट छ । उनको पार्टी पनि संसद्मा पाँचौं स्थानमा छ । तर, बेनेट दुवै पक्षको लागि निकै महत्वपूर्ण थिए । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् । यामिना पार्टीका साथै अन्य तीन पार्टीको पनि समान सात सिट छ ।
निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नेफ्टाली बेनेट विना कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिएको थियो । बेनेटलाई प्रधानमन्त्री नेतान्याहू वा विपक्षी नेता येर लेपिडमध्ये एकसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनले मध्यमार्गी नेता येर लेपिडसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेका हुन् । यद्यपि यी दुई नेताको विचारधारा निकै भिन्न छ ।
४९ वर्षीय बेनेटलाई कुनै समय नेतान्याहूको बफादार मानिन्थ्यो । नेतान्याहूसँग अलग हुनुभन्दा अगाडिसम्म बेनेट सन् २००६ देखि २००८ सम्म इजरायलको चिफ अफ स्टाफको रुपमा रहेका थिए ।
नेतान्याहूको लिकुड पार्टी छाडेपछि बेनेट दक्षिणपन्थी धार्मिक यहुदी होम पार्टीमा गएका थिए । सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा बेनेट निर्वाचित भएर इजरायलको संसद्मा पुगेका थिए ।
सन् २०१९ सम्म प्रत्येक गठबन्धनको सरकारमा बेनेट मन्त्री बनेका थिए । सन् २०१९ मा बेनेट दक्षिणपन्थी गठबन्धनले एक सिट पनि पाएको थिएन । ११ महिनापछि पुनः निर्वाचन भयो र उनी यामिन पार्टीको प्रमुखको रुपमा चिर्वाचित भएर संसद्मा पुगे ।
नेफ्टाली बेनेटलाई नेतान्याहूभन्दा पनि धेरै अति राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी नेता मानिन्छ । बेनेट इजरायललाई एक यहुदी राष्ट्रको रुपमा वकालत गर्दै आएका छन् । साथै उनले वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरुसलेम र सिरियाली गोलान हाइट्सलाई पनि यहुदीको इतिहासको एक भागको रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
यी सबै क्षेत्रमा सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि इजरायलको नियन्त्रण छ । बेनेटले वेस्ट बैंकमा यहुदीको बसोबासको पक्षमा छन् भने साथै ययो विषयलाई लिएर उन निकै आक्रामक पनि देखिँदै आएका छन् ।
यद्यपि उनले गाजा क्षेत्रमा भने कुनै दाबी गरेका छ्रैनन् । सन् २००५ मा इजरायलले यहाँको सेनालाई हटाएको थियो । वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसलेमको १४० बस्तीमा ६ लाखभन्दा धेरै यहुदी बस्छन् । यो बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अवैध भएको बताउँदै आएका छन् । तर, इजरायलले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच बस्ती निर्धारण सबैभन्दा विवादित मुद्दा हो । प्यालेस्टाइनियनहरु यी बस्तीबाट यहुदीलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् र उनीहरु वेस्ट बैंक, गाजासहितको एक स्वतन्त्र मुलुकको माग गर्दै आएका छन् । यसको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
बेनेटले भने यस्ता सबै मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनी अब यहुदीको बस्ती तीव्रताको साथ विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बेनेटका अनुसार यहुदीको बस्तीको विषयमा नेतान्याहूको नीति भरोशा गर्न लायक छैन ।
बेनेट अंग्रेजी भाषा राम्रो बोल्न सक्छन् र विदेशी च्यानलमा पनि देखिँदै आएका छन् । साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पनि आक्रामक भएर अन्तर्वार्ता दिन्छन् ।
बेनेट इजरायलमा प्यालेस्टाइनहरुको लागि छुट्टै राष्ट्रको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने दुई राष्ट्रको सिद्धान्त इजरायल र प्यालेस्टाइनको समस्या समाधानको बाटो भएको बताउँछन् । दुई राष्ट्रको सिद्धान्तको वकालत अमेरिकाले पनि गर्दै आएको छ र राष्ट्रपति जो बाइडन पनि यसमा सहमत देखिएका छन् ।
फेब्रुअरी २०२१ मा नेफ्टाली बेनेटले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘जबसम्म म कुनै पनि रुपमा सरकारमा हुन्छु, त्यतिबेलासम्म एक सेन्टिमिटर जमिन पनि मिल्नेछैन ।’
बेनेटले प्यालेस्टाइन चरमपन्थीको सामना गर्न थप कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनी मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । यहुदी इजरायलमा सन् १९६१ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन ।
नेफ्टालीले सन् २०१८ मा गाजाका प्रशासकले हमाससँग गरेको युद्धविराम सन्धीको विरोध गरेका थिए । उनले गत मे महिनामा ११ दिनसम्म हमाससँग चलेको युद्धको क्रममा मारिएका प्यालेस्टाइननै उनीहरुको मृत्युमा दोषी रहेको बताएका थिए ।
बेनेटको राजनीतिमा यहुदीको गौरव र राष्ट्रवाद सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । उनी आफ्नो टाउकोमा किप्पाह लगाउँछन् । यसले धार्मिक यहुदी आफ्नो टाउको ढाक्ने गर्छन् ।
सन् २०१४ मा पार्टीको निर्वाचन प्रचारमा बेनेटले न्युयोर्क टाइम्स र वामपन्थी अखबार हारेट्ेजको नक्कल गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गरेका थिए । दुवै अखबारले इजरायलको कदमको आलोचना गरेका थिए ।
यो भिडियोमा बेनेटले दुवै अखारको खिल्ली उडाउँदै ‘सरी सरी’ भनेका थिए । भिडियोको अन्तिममा उनले अब माफी माग्न छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।
बेनेटको पृष्ठभूमि राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला सेना र एक व्यापारीको रुपमा थियो । उनी इजरायलको विशेष बलको दुई शाखामा सैनिकको रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । सेनामा सेवा दिएपछि उनले प्रविधि कम्पनी स्थापना गरेका थिए र उनले यसबाट उल्लेख्य पैसा पनि कमाएका थिए।
सन् २०१४ मा बेनेटले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो सम्पत्तिको विषयमा भनेका थिए, ‘न म १७ स्टिक्स खान्छु न निजी विमान छ । मेरो यति हैसियत छ कि म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्न सक्छु ।
किशोरकिशोरीका लागि ६० लाख फाइजर खोप किन्न सम्झौता, कहिले आउछ खाेप ?
कांग्रेस १४औं महाधिवेशनः नेतृत्वमा चर्को प्रतिस्पर्धा
असोजसम्म एक तिहाइ नेपालीलाई खोप
प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि आज पहिलो बैठक
६४ लाख डोज खोप ल्याइँदै, ३२ लाख साउन १५ सम्ममा ल्याइने
देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना, यस्ताे छ तीन दिनकाे पूर्वानुमान
जाँदा जाँदै ओलीले भने- ‘सबै नेपालीलाई पुग्ने खोप प्रबन्ध गरिसकेका छौं’
देशलाई सम्झिन मैले रात पर्खिनु पर्छ
काठमाडौं उपत्यकाको आजबाट थपिएको निषेध आदेश : के खुल्ने के नखुल्ने ? (सूचीसहित)
वाउ रुवीभ्याली !
कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि बेलायतले मास्क लगाउनैपर्ने नियम हटाउँदै, यस्ताे छ कारण
काठमाडौंमा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाइँदै, यी हुन् ३२ खोप केन्द्र
पेरुलाई हराउँदै ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा
यस पालिको साउनमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने
मलाई असार चाहिन्छ